CarsDB Auto Show 2017, Thuwunnabhumi Event Park, Yangon Event | Shtoor
CarsDB Auto Show 2017 is the first and biggest ever car expo in Yangon. Being No.1 and the biggest online automobile platform in Myanmar, CarsDB brings the most exciting auto show for car enthusiast, potential buyers and businesses.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး CarsDB Auto Show 2017 ကို နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် မှ ၂၆ ရက် အထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ သုဝဏ္ဏဘူမိ ကွင်းပြင်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားပါမည်။ ကားဝါသနာရှင်များ၊ ကားဝယ်ယူရောင်းချလိုသူများ နှင့် အခြားကားနှင့်ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး ပြပွဲကြီးအား မြန်မာ့နံပါတ် ၁ ကားအရောင်းအဝယ် Website ဖြစ်တဲ့ www.carsdb.com မှစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။
More detail will be updated soon. Stay tuned!
ပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အသင့်ပြင်ထားလိုက်ကြပါစို့။
Thuwana, Yangon, Myanmar
View more events at Thuwunnabhumi Event Park